Contributor, Columnist » သင်္ကြန်၊ အတာ၊ အတာအိုး၊ တာစားနှင့် သိကြားမင်း ၂၀၁၆ (၁၃၇၈)	19
Thint Aye Yeik says: သင်္ကြန်ပုံပြင်ထဲမှာ. . . ရာဟု ဆိုတဲ့ နေ့နံအတွက် ဘာလို့များ ထည့်မတွက်ကြသလဲမသိ။
kai says: အားနေတယ်ဆိုတော့.. အလုပ်ပေးထားမှနဲ့တူတယ်..။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေဖွင့်လား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မရှိ/မဖွင့်
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာလိုင်းသည်ကား ဂျီမေးလ်ပင် ဖွင့်မရ .fb အဝိုင်းလည်ပေးရုံမျှ တတ်စွမ်းသည်မို့ မြန်မာပြည်သူ အများ(အများး)ထို အင်တာနက် အဝိုင်းထဲမှာပင် တဝဲမက
ဂျက်စပဲရိုး says: အင်တာနက် ဆိုင်တွေ ပိတ်ကုန်တာ တခြား ဘာပြဿနာ မှ မရှိပေတည့်
လုံမလေးမွန်မွန် says: လောလောဆယ်တော့ ရှိသမျှ စောင်တွေ ခြင်ထောင်တွေ ဒိုဘီအပ်ထားခဲ့ပြီ.. သင်္ကြန်ဆို အဲဒါတွေ လျှော်ရမယ်ဆိုတာလောက်တော့ သတိထားမိတယ်.. ကျန်တာတော့ ဘာအယူမှမရှိ… သင်္ကြန်တွင် အလုပ်တွေခေါင်းထဲမထည့်ဘဲ နားမည်…
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အူးမြောက်တို့ကတော့ ပိုက်ဆံရရင် ဘာအလုပ်မဆို လုပ်သဟေ့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သင်္ကြန်ရေထိမှ တစ်နှစ်လုံးကျန်းမာတာတဲ့။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဟုတ်တာ မဟုတ်တာအပထားလို့ … ပေါ့ လေ
kai says: အဲဒီသင်္ကြန်စာက.. ကျွဲပြဲစီးလားတဲ့.. တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းကလည်း.. သိကြားမင်းမဟုတ်ပါဘူး..။
နှစ် ၂၀၀၀ကျော်ခရီး.. အဆင်ပြေသလို.. မြန်မာမှုလုပ်လိုက်တယ်လို့.. ထင်မိပါကြောင်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးမာမွတ်သာမီး သန်ဆင်ခိုင်မ်ကို ခြစ်တယ်.. သင်္ကြန်ရေလာလောင်းလို့ရမား
Wow says: လော့အင်ကျလိ သင်္ကြန်ကော
kai says: လော့ကျတဲ့ကျလိကျလိအိမ်မှာက.. ၁၇ရက်နေ့..မှ သင်္ကြန်ကျမယ်..။
Wow says: ရေဈေးတက်တော့ ရေအစားဘီယာလှူရင်ကော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: မိုင်နာတွေရှိတုံး.. ဘီယာဘူးလေးတွေ မြင်သာတာနဲ့ဆို.. ရဲကတစ်ကက်ပေးမှာ..။
ဖွက်ပြီး.. ကိုယ်ဖာကိုယ်ပဲ…သောက်မှနဲ့တူတယ်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 1006
htet way says: ဒီသင်္ကြန်စာကို ခက်ခက်ခဲခဲလိုက်ရှာရတယ်။ မရဘူး။
kai says: အတာစားသည့် နေ့နံသားသမီးတို့သည် အတာတက်မည့်အချိန် အတိအကျတွင် “အတာစား”ရပါတယ်။ အတာစားဟူသည် အတာတက်ချိန်မှာ ကောင်းမွန် သန့်ရှင်းစွာ ဝတ်စား ဆင်ယင်လျက် အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာ ပူဇော်ရိုသေထိုက်သူများကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ဖြင့် ဆက်ကပ်ခြင်း လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း ပြုကြရတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: တနင်္ဂနွေသားသမီး ။ ။ ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံပါက အောင်မြင်အံ့။အင်္ဂါနေ့၊ကြာသပတေးဖွားသူတို့နှင့် အကျိုးပေးလတ္တံ့။အချစ်ရေး၊လူမှုရေးအရှုပ်အထွေးများကို သတိဖြင့်ရှောင်ရှားပါ။အိမ်ထောင်ရေးတွင် အမျိုးသမီးတို့အဖို့ ကံကောင်းအံ့။ပညာရေး၊အိမ်ခြံမြေ၊ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးမည်။အချစ်စစ် တွေ့ကြုံအံ့။
လောလောဆယ်.. ဒါလေးတွေဖတ်ပြီး သဘောခွေ့နေပါကြောင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အမေက ထားဝယ်ဘက်က သူ့အယူကတော့ စနေအတာစားတယ်ဆို။ စနေသားသမီးက ကံမကောင်းဘူးပေါ့။ အိမ်မှာ စနေ ၃ယောက်ရှိရင် အတာအိုး ၃အိုးထားရတယ်။ သိကြားမင်းအတွက် တစ်အိုး ပေါင်း လေးအိုးပေါ့။ အကယ်၍ တစ်ယောက်မှ မရှိရင် သိကြားမင်းအတွက် တစ်အိုးပဲထိုးရတယ်တဲ့။ ဒီနှစ် စနေအတာစားတော့ အိမ်မှာ စနေနှစ်ယောက်မို့ နှစ်အိုး သိကြားမင်းအတွက်တစ်အိုး သုံးအိုး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ဗမာတွေတော်တော်များများ.. တာစားတယ်ဆိုတာမကောင်းတယ်လို့ထင်ကြပုံရတယ်..။
တာစားတယ်ဆိုတာ. ကောင်းတဲ့သဘောတဲ့..။ amazed.ico